HNB(Kupisa Kusiri Kupisa), inozivikanwawo sehutsi hwetembiricha yakaderera, imhando itsva yechigadzirwa chefodya chinosanganisa chinoongorora utsi nezvitsiko zvehutsi.Iyo "yakaderera tembiricha fodya" yakagadzirwa nepfungwa ye "Kupisa Kusingatsva".Inoshandisa mudziyo wakakosha wekudziya (smoke set) Kudziisa fodya yakagayiwa (special smoke heatsticks) kune imwe tembiricha.Kuita kuti fodya ipise zvekuti inoburitsa hutsi hwekunwa.
Sarudzo yakanakisa yemuchero-mudiwa, nakidzwa neyakatsetseka uye yakagadzika chiitiko chemichero ine muto, pamunwe wako!Inspiring spark yekurota masikati kana kufunga.
Maererano neUnited States, Japan, masayendisiti eEurope vanodzidza, vanowanzodya zvigadzirwa zveblueberry, asiwo zvakanyanya kuwedzera maonero, kubvisa kuneta kwemaziso.Mishumo yezvechiremba uye yekiriniki inoratidzawo kuti anthocyanins mu blueberries inogona kukurudzira kuvandudzwa kwe rhodopsin mumasero eretinal, kudzivirira myopia uye kunatsiridza kuona.Blueberries inozivikanwa nekuti ine anthocyanins yakawanda, iyo inomutsa retina kusimbisa kuona uye kudzivirira kuneta kwemaziso.
Kupisa pasina kupisa kushandiswa kwemidziyo yekunze chete kudziyisa pasina kutsva, fodya yakajairika muchiedza chekuputa, tembiricha yakakwira (600°C-800°C) inoburitsa zvinhu zvinokuvadza zvakawanda (zvinowanzozivikanwa setara), uye midzanga ine tembiricha yakaderera. paanenge 350 ° C, zvinhu zvinokuvadza zvichaderedzwa zvishoma.
Zvakapfuura: HEECHI Vehiki Kofi Nicotine HNB Herbal Stick
Zvinotevera: HEECHI Regular Nicotine HNB Herbal Stick
Zita reChigadzirwa: HEECHI Blueberry Nicotine HNB Herbal Stick